Olana mpamatsy sy orinasa - Mpanamboatra vokatra any Sina
Coronavirus IgG sy IgM Test Cassette
Ny foto-kevitry ny Artron COVID-19 IgM / IgG Antibody Test dia fanafody immunochromatographic miaro-pandrika amin'ny tsikombakomba miaraka amin'ny fahasamihafana ny tsimok'aretina IgM & IgG amin'ny viriosy COVID-19 ao amin'ny serum, plasma, na santionany rehetra.
Azo ampiasaina amin'ny fandidiana fandidiana sy fikarakarana ny marary.Inspection fisorohana ny areti-mifindra amin'ny toerana be olona; Fahafahan'ny otrikaretina voan'ny areti-mifindra; ampiasaina amin'ny tafika, ara-pahasalamana, simika, fiarovana tontolo iainana, fitaterana, fisorohana ny areti-mifindra ary ireo sehatra hafa.
Mametra ny ranon-tsavony, ny menaka ary ny menaka ny aprily .Ny fanodinana, hatsaran-tarehy, famokarana, fananganana ary fidiovana & fampiasa isan'andro.
Mitokana Gown PE1003B
Ny laboratoara, lakozia, ny faritra rehetra dia mila fiarovana fiarovana miaro ny tsiranoka.
Porofo-rano, vovoka, porofo-menaka
Ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro izany. Azo ampiasaina any amin'ny biraon'ny asa, lakozia, làlan-orana, fety lehibe, fivoriana sns. Ny famaritana be dia be manohitra ny zavona dia mitokana amin'ny banky, mpiasan'ny fitaterana, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana ary toeram-bahoaka; hisorohana ny mpampiasa hanaisotra ireo loto amin'ny endrika isan'andro amin'ny fiainana sy ny asa. Mandritra izany fotoana izany, ny ampinga Face dia manana fampisehoana anti-fog tsara ary manome fahitana mazava.
Mitokana Gown PE1003
Ny laboratoara, ny lakozia, ny faritra rehetra dia mila fiarovana fiarovana miaro ny tsiranoka.
Isokana Gown E
Isokana gown A
Miaraka amin'ny rojo roa miendrika sisiny telo sy elanelana vita amin'ny elanelana manoloana ny fisokafan'ny tarehy, ny zipo dia mety tsara kokoa ny endriky ny tarehy ary manatsara ny fiaro fiarovana.
Address: Efitra 1009, trano fivarotana Shina, No.100 Hong Kong afovoany, Qingdao, China
Inona no tianao ho fantatra?
Akanjo fitsaboana fitsaboana, Water-Proof Apron, Rano Hdpe aprily amin'ny rano, Fiakanjo fiarovana, Tariby endrika-vovoka mihetsiketsika, Fiakanjo fiarovana,